Sampana iray ao amin’ny FJKM izay misokatra ho an’ny tanora rehetra. Araka ny maha-Tanora azy dia mijoro ho vavolombelon’i Kristy eo anivon’ny Firenena misy azy reo ary mitsangana ho fianarana ho an’ny rehetra.
Tamin’ny 27 aprily 2014 no notokanana ny STK FJKM Rennes – Laval. Tonga nanotrona izany fotoan-dehibe izany ireo solontenan’ny birao STK SP VFA 37, ny STK FJKM Champigny ary ny STK FJKM Ziona Vaovao Paris.
Dimanche 16 mai 2021 - FANOMPOAM-PIVAVAHANA Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo, tarihan'ny Mpitandrina Rakotomanana Tahiry amin’ny 10 ora sy sasany maraina, Place Saint Paul 53000 LAVAL
Dimanche 23 mai 2021 - FANOMPOAM-PIVAVAHANA PENTEKOSTA Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo, tarihan'ny Mpitandrina Rajaonah Lalaina amin’ny 10 ora sy sasany maraina, Place Saint Paul 53000 LAVAL